Al-Shabaab oo xalay weerar culus ku qaaday xaruntii hore ee Asluubta
April 3, 2012 - Written by
Muqdisho:Ciidamada Ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar qorsheysan waxay ku qaadeen xaruntii hore ee Asluubta ,Sarkuusta iyo xaafadda Kaxda ee Degmada Dharkenley halkaasi oo ay xarun ku leeyihiin ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM . Dagaalka xalay ayaa ahaa mid aad u culus wuxuuna ku bilaawdey Duqeyn culus oo loo geystay xaruntii hore ee Asluubta waxaana ku xigay dagaal foolka fool ah oo dhex maray ciidamada Al-Shabaab iyo ciidamada DFKM oo ay kaabayaan kuwa AMISOM.
Wariyaha Halgan.net ee Muqdisho ayaa sheegaya in dagaalka xalay uu ahaa mid culus wuxuuna dagaalka sababay khasaaro kala duwan oo soo gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM waxaana la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah ciidamada AMISOM xerada Xalane oo ay ku leeyihiin isbitaal weyn.
Sarkaal u hadalay ciidamada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay mas’uul dagaalkii xalay wuxuuna sheegay in ay khasaaro gaarsiiyeen ciidanka DFKM iyo kuwa AMISOM waloow ay saraakiisha ciidanka AMISOM ay inkireen .
Dagaal xalay ayaa waxaa sidoo kale ku waxyeeloobay dad rayid ah waxaana ku dhintay wiil yar ka dib markii hoobiye uu ku dhacay xero ay degan yihiin barakacayaasha oo ku taal Ex-control Afgooye